AUMBI: Misokatra loharano fampiharana hamoronana USB azo entina ao amin'ny Windows | Avy amin'ny Linux
AUMBI: Misokatra loharano fampiharana hamoronana USB azo entina ao Windows
Linux PostInstall | | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Isika izay mpahay siansa amin'ny solosaina na tia siansa amin'ny solosaina be dia be, mahalala tsara, inona a USB azo alefa, na azo alefa na azo amboarina, amin'ny Espaniôla. Na izany aza, ho an'ireo tsy dia manam-pahalalana amin'ilay raharaha, tsy hafa io fa tsotra Fitaovana fitahirizana USB izay mitondra ao anatiny, iray na maromaro Rafitra miasa, mety mihazakazaka, samy ho an'ny anao fametrahana raha ny anao utilisation.
Mba hamoronana an'ity karazana fitaovana ity, na amin'inona na amin'inona Operating System, betsaka ireo Misy fampiharana (Applications), fa amin'ity tranga ity dia mifantoka mivantana ity famoahana ity AUMBI, izay a fampiharana open source vaovao, noforonina ho an'ity tanjona ity, amin'ny Windows.
Na izany aza, tsara ny mahatadidy fa ny Apps an'ity karazana ity, izany hoe, ireo fampiharana mamela antsika hitondra iray na maromaro, Rafitra miasa na fitaovana azo aidina, ao a fiara usb hampiasa amin'ny solosaina rehetra, misy maro.
Raha te hahafantatra azy ireo ianao dia afaka miditra amin'ny boky navoakanay taloha "Mpitantana fandraketana sary disk amin'ny fitaovana USB", izay voatonona ireo Apps tena ilaina sy malaza indrindra amin'ity karazana ity, na ny multiplatform, na ho an'ny fotsiny GNU / Linux, Windows ary MacOS.
1 AUMBI: Installer USB MultiBoot tanteraka
1.1 Inona ny AUMBI?
1.2 Endri-javatra na tombontsoa miavaka?
AUMBI: Installer USB MultiBoot tanteraka
Inona ny AUMBI?
AUMBI dia midika hoe "Installer USB MultiBoot tanteraka" amin'ny teny anglisy, na "Installer USB Multiboot tanteraka" amin'ny Espaniôla. Ary io dia, fitaovana rindrambaiko ampiasaina handika a Operating System avy amin'ny ISO fisie ho an'ny fiara usb fitehirizana.
Amin'ny fomba toy izany ny fametrahana na fitsapana ny iray na maromaro Rafitra miasa GNU / Linux, Windows, ary fitaovana na fitaovana ilaina amin'ny fanombohana. Ary amin'ny tranga Rafitra miasa ampidirina, mamela azy ireo ho configured miaraka amin'ny fananana fikirizana, izany hoe mitahiry rakitra na fanovana natao momba azy ireo.
Toy izao no ilazan'ny mpamorona azy ao amin'ny tranokala ofisialy:
"AUMBI dia loharanom-pahalalana misokatra izay ahafahantsika mamorona USB multi-boot miaraka amin'ireo Operating Systems isan-karazany; Miorina amin'ny YUMI, AUMBI dia mikendry ny hanararaotra ilay kaody ary hanatsara azy hatrany, ny fanovana voalohany avy teo alohany dia ny fahaizan'ny multimédiage an'ny mpamosavy sy ny menio boot. Amin'ny 1MB mahery fotsiny, AUMBI dia fitaovana tonga lafatra azo entina mora foana".
Endri-javatra na tombontsoa miavaka?
Koa satria a sokafy misokatra ny 'Yumi", miavaka, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny:
Fivoarana haingana sy manatsara ny loharano loharano.
Tohano amin'ny fiteny maro hafa. Ny maha-teny Espaniola anao, tohanana tanteraka.
Tena tsara antontan-taratasy amin'ny Espaniôla sy Anglisy, na amin'ny endrika HTML na PDF.
Tohano bebe kokoa Fitsinjarana GNU / Linux sy Fitaovana azo amidy maoderina.
Raha tsorina AUMBI Izy io dia tsara indrindra Misokatra fampiharana loharano hananganana USB azo entina amin'ny Windows, satria misokatra tanteraka dia mamela fanavaozana bebe kokoa momba Yumi, ary hampiasaina amin'ny fahatokisana sy filaminana bebe kokoa. Ho fanampin'izany, manana fanohanana bebe kokoa amin'ny fiteny espaniola sy amin'ny Rafitra miasa malalaka sy malalaka maoderina kokoa.
Izaho manokana, ireo fotoana vitsy ampiasako Windows dia ny fampiasana Yumi, fa izao kosa dia hanampy amin'ny AUMBI amin'ny lisitry ny Rindrambaiko maimaim-poana sy fampiharana lozisialy misokatra amin'ny Windows.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «AUMBI (Absolute USB MultiBoot Installer)» izay fampiharana vaovao an'ny «Código Abierto» misy hamoronana USB azo entina ao amin'ny Windows, mahaliana sy mahasoa tokoa ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AUMBI: Misokatra loharano fampiharana hamoronana USB azo entina ao Windows
Hernan dia hoy izy:
Salama. Rehefa manomboka rindrambaiko iray aho dia mahazo efijery diso izay milaza amiko fa nisy ny sasanysns lesokasatria tsy misy firaketana. Hitako fa ny tranokalanao dia feno feno fampianarana saingy tsy nahita zavatra mifandraika amin'ity lohahevitra ity aho. Afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i Hernán
Miarahaba anao Hernan! Ity dia GNU / Linux, rindrambaiko maimaim-poana ary bilaogy open source. Ary heveriko fa momba ny Windows ny fanontanianao. Na izany aza, tokony hotadiavinao ny anaran'ny tranomboky (DLL) voalaza ao amin'ny efijery hadisoanao ary andramo jerena hoe inona ny fonosana na patch izay ananany hahafahanao mampiditra azy ireo ao amin'ny System Operating System anao.
Odoo: Sehatra fampiharana lozisialy misokatra amin'ny Internet
Linspire 8.7 dia mampanantena fahombiazana lehibe amin'ny solosaina Windows 10 miadana